Isikhathi esining impela ngoba impatho ebusweni asphalt futhi ungangenisi amanzi of imiklamo ehlukahlukene basebenzise nebitume emulsion - uhlobo uhlelo lapho izinhlayiyana isakhi esiyinhloko amelwe lusanda aqueous ngesimo izakhi ehlukile. Ukuze le ndlela yokuxhumana inikezwa isenzo ingcina, ngenkuthalo esetshenziswa izithasiselo ehlukahlukene - emulsifiers. Kuyinto obungenakuphikwa bokuthi ungangenisi amanzi bituminous kuyazuzisa ngokuya ukulondoloza izinsiza nokuhlanzeka kwemvelo. Ngokuvamile, ochwepheshe emsebenzini nazo brand ezahlukene impahla isizinda. Ngakho ukwakhiwa etholwe kungahluka kakhulu komunye nomunye e izakhiwo.
Noma yimuphi emulsion ibitume zidinga ukwengeza kuphela, inani yalo kufanele ibe anembile ngempela. Kungenjalo ezimfushane yezingxenye ngazinye noma nokonakala ngokweqile ingxube singenzeka. I kuphela isetshenziswa njengoba ekunciphiseni ejenti Ukwakheka degree of viscosity. Ngokuphathelene amanzi equkethwe efanayo ungangenisi amanzi cationic ingxube ke akanandaba ivolumu ungeze kuka anionic analogue. Lesi sakamuva wabo ngokujulile basabela inani ukungcola eziqukethwe uketshezi wanezela.
Lapho senza Izingxube, ukufakwa okukhethekile zokukhiqiza ibitume emulsion, okuyinto has a eyinkimbinkimbi. Kuhlanganisa: iyunithi main nge isigayo Colloid, ukulawula izinhlaba, nokushintsha kokudla nokufakwa kwamanzi kanye ibitume imigqa, isitoreji umthamo materials ahlukahlukene kanye amapayipi kanye amaphampu. Umsebenzi uqhutshwa ngesisekelo kuhlangana olunzulu, kuvele lo Ukwakheka kusikisela emulsification olwengeziwe. Izinga wokugcina sixhomeke kakhulu homogeneity we ingxube kanye pretreatment.
Cishe zonke amayunithi imishini zakhiwe ngezinto lungekho ukugqwala, okuyinto wenza sikwazi ukufeza ukuphila inkonzo esiphezulu. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ngokuphathelene amayunithi nezingxenye okuyinto ngqo uxhumane nomuntu ophansi aqueous. Okwamanje kuphela asebenzisa imishini yokukhulisa ezenzakalelayo uthole umkhiqizo izinga, uma ibitume emulsion elihlangabezana nazo zonke izidingo. Inombolo kanye izici umkhiqizo kukalwa izinzwa ekhethekile. Ngokusekelwe yokuthi property ingxube yokugcina zincike emulsifiers ivele ku silwenza amadivayisi uyakwazi abancela izingxenye ezimbili.
Ngaphambi emulsion itiyela lisetshenziswa ebusweni, base kumelwe zilungiswe ngokucophelela. Ukuqeda luthi alufane ubudala futhi doti ahlukahlukene, imigodi bakubheka amamilimitha angu kunangendlela ezintathu. Ngaphezu kwalokho, priming Kwenziwa nge Ukwakheka emulsion. Ikakhulukazi ithonya ingxube ukugeleza uhlobo surface ngayo. Kubuka emaphaketheni zingatholakala nge ukusetshenziswa isilinganiso komkhiqizo. Lapho amanzi iyasha kusukela isixazululo phezu uzohlala ifilimu ezondile itiyela, okulandelayo ukuvikela enamathela.